Madaxweynaha Somali land oo qaabilay Wafdi ka socda Buuhoodle iyo Wada hadal Labada Dhinac dhexmaray.
Home»Somali News»Madaxweynaha Somali land oo qaabilay Wafdi ka socda Buuhoodle iyo Wada hadal Labada Dhinac dhexmaray.
Facebook	Twitter	Wednesday, August 08 2012	Madaxweynaha Somali land oo qaabilay Wafdi ka socda Buuhoodle iyo Wada hadal Labada Dhinac dhexmaray.	Written by Xuseen Xuska
Add comment	Madaxweynaha Somali land Axmed Siilaanyo ayaa qaabilay Wafdi ka socda Deegaanka Buuhoodle,kuwaasi oo maalmihii aynu soo dhaafnay Caynabo wada hadal kula lahaa Wasiiro iyo Siyaasiyiin ka tirsan MMaamulkaasi.
Wafdiga ka socda Buuhoodle oo la sheegay in uu horkacayo Siyaasi Xaglo Toosiye ayaa la sheegay in ay dhankooda doonayaan in wax laga qabto colaadii Buuhoodle iyo in xal loo helo dagaalada soo noqnoqday ee deegaankaasi.
Wadahadalada ayaa waxyaabihii laysku soo hadal qaaday la sheegay in ay kamid ahaayeen in Maxaabiista lakala haysto lasoo daayo si loo abuuro jawi is fahan oo horseedi kara in laga wadahadlo mustaqbalka.
Wafdigani ka socda Buuhoodle ayaan la sheegin in Saraakiil ka tirsan Maamulka Khaatumo ay qayb ka yihiin,iyadoona bilowgii sanadkan Maamulkaasi lagu aas aasay Magaalada Taleex,iyadoona dadka kasoo jeeda deegaanada SSC ay isku afgarteen intooda badan in ay taageeraan Maamulkaasi.	Social sharing
Madaxweynaha Somali land oo u magacaabay Wasiiro ku xigeeno Rag horay usoo noqday G.Gobol.
DHAGAYSO : Gudoomiyaha Gaarisa oo ka hadlay u jeedka socdaalkiisa Puntland.
Dowlada Federaalka oo soo dhoweysay wadahadal mar kale dhex mara iyaga iyo Maamulka Somali land.
Wasiiro ka tirsan Xukuumada Soomaaliya oo gaaray Magaalada Kismaayo.
China oo damacsan maal galin dhaqaale oo ay ku samayso Soomaaliya.
« Madaxweynaha Soomaaliya oo saxiixay Qorashaha Amaanka iyo Xasilinta Qaranka 5-ta Sano ee soo socota.	Puntland oo Xoojinaysa Amaanka Magaalada Garoowe kadib dil dhowaan Magaaladaasi loogu gaystay Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaanka. »